နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရေးရရှိဖို့ နေပြည်တော်တွင် ကျောင်း ကောင်းကောင်း ရှာနေပါသလား?? – BFI Education Services Co., Ltd.
14MayAugust 7, 2018
ရင်သွေးငယ်များ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရေးရရှိဖို့ နေပြည်တော်တွင် ကျောင်း ကောင်းကောင်း ရှာနေပါသလား?
Ready for your 2018-2019 Academic Year !
“၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ” ပညာသင်နှစ်အတွက် Nay Pyi Taw International Science Academy(NISA) ကျောင်းတော်ကြီးမှ လူကြီးမင်းတို့၏ အသက် (၂) နှစ်မှ (၁၀) နှစ်အရွယ် ရင်သွေးရတနာလေးများကို ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်ရှိ ကျွန်မတို့၏ Nay Pyi Taw International Science Academy(NISA) ကျောင်းတော်ကြီးတွင် အသက်(၂)နှစ်မှ (၆) နှစ် အရွယ် ရင်သွေးငယ် များအတွက် နိုင်ငံတကာ မူကြို ပညာရေးနှင့် အသက်(၆)နှစ်မှ (၁၀)နှစ် အရွယ် ကလေးငယ်များအတွက် Cambridge သင်ရိုး ညွှန်တမ်းနှင့်အညီသင်ကြားပေးသော မူလတန်းပညာရေးကို နိုင်ငံတကာ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်း နှင့်အညီ သင်ကြား ပေးနေပါသည်။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် မေလ (၂၅)ရက်နောက်ဆုံးထားပြီး ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပါပြီ။
“၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ” ပညာသင်နှစ်အတွက် Nay Pyi Taw International Science Academy(NISA) ကျောင်းတော်ကြီးမှ လူကြီးမင်းတို့၏ အသက် (၂) နှစ်မှ (၁၀) နှစ်အရွယ် ရင်သွေးရတနာလေးများကို ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်ရှိ ကျွန်မတို့၏ Nay Pyi Taw International Science Academy(NISA) ကျောင်းတော်ကြီးတွင် အသက်(၂)နှစ်မှ (၆) နှစ် အရွယ် ရင်သွေးငယ် များအတွက် နိုင်ငံတကာ မူကြို ပညာရေးနှင့် အသက်(၆)နှစ်မှ (၁၀)နှစ် အရွယ် ကလေးငယ်များအတွက် Cambridge သင်ရိုး ညွှန်တမ်းနှင့်အညီသင်ကြားပေးသော မူလတန်းပညာရေးကို နိုင်ငံတကာ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်း နှင့်အညီ သင်ကြား ပေးနေပါသည်။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် မေလ (၂၅)ရက်နောက်ဆုံးထားပြီး ကျောင်းအပ်လက်ခံနေ ပါပြီ။
မူကြိုပညာရေး၏ အဓိကသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် အခြေခံသင်ယူမှုများဖြစ်သည့် စာပေ (Literacy)၊ ဘာသာစကား အသံထွက် (Phonics)၊ အနုပညာ(Fine Arts)၊ သိပ္ပံ (Science)၊သင်္ချာ(Math)၊ လှုမှုဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှု (Personal & Social Development)၊ ဂီတနှင့်လှုပ်ရှားမှု (Music & Movement)၊ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု (Health & Safety)၊ လှုမှုရေးဘာသာရပ် (Social Studies)၊ကာယပညာ(Physical Education)နှင့် ဘ၀တွက်တာ ပညာရေးများ (Character & Value Education) စသည့်သင်ခန်းစာများပါဝင်သည့်အပြင် သင်ရိုးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သော နည်းပညာ ၊ ကျွမ်းဘား၊ ရေကူး၊ ကာယ၊ ဘလော့တုံးလေးများ အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ကစားခြင်း၊ ဆေးခြယ်ခြင်း၊ လေ့လာရေးခရီးများဖြင့် တက်ကြွပြီး သက်ဝင် လှုပ်ရှား နေသောအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းထားပါသည်။
မူလတန်းပညာရေးတွင် Cambridge သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုအသုံးပြုပြီး STEM ဘာသာရပ်မျာြး ဖစ်သည့် (သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သချာင်္) နှင့် ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်များကို အလေးပေးသင်ကြားရုံမျှမက ကလေးများ၏အကျင့်စာရိတ္တ ပိုမိုကောင်းမွန် စေရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို Native Speaker များကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်အောင် သင်ကြား ပြသပေးနေပါ သည်။ထို့ပြင် ပန်းချီ၊ သီချင်း၊ပြဇာတ်၊ ကာယ နှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ပါထည့်သွင်းသင်ကြားပေးပါသည်။
ကျွန်မတို့ကျောင်းမှသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများသည်ကလေးများ၏စိတ်ဝင်စားမှုများ၊လိုအပ်ချက်များ၊အရည်အချင်းများနှင့် အရေးပါသောတိုးတက်မှုများအပေါ် အခြေခံထားပါသည်။ကလေးများ၏ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။
ကျွန်မတို့ ကျောင်းတော်ကြီး၌ လူကြီးမင်းတို့၏ ရင်သွေးငယ်များကို ကျောင်းအပ်နှံခြင်းအားဖြင့် ကလေးများ၏ ဘက်စုံဖွံ့ ဖြိုးရေးအတွက် အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုက်ပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။Nay Pyi Taw International Science Academy (NISA) တွင်ဖွင့်လှစ် ထားသော မူကြိုပညာရေး ၊ မူလတန်း ပညာရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း- ၀၆၇ ၄၃၃၁၃၄-၅၊ ၀၉၄၂၈၄၆၀၃၇၃ ၊ ၀၉ ၇၆၄၉၈၇၃၉၅ တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။
by Aung Thu Yain BFI News, Naypyitaw
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်သည် လာမည့်မေ (၂၈) နေ့တွင် စတင်တော့မည့်အကြောင်း အသိပေး ပြောကြားလိုပါသည်။Congratulations to our IB Diploma Graduates.